Sideed Tallaabo Oo Aad Si Sahlan Ugu Dhamayn Kartid Buuga Qalin Jabinta “Thesis Writing”.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: August 25, 2014, 3:19 pm
In badan ma ka warwartay sida aad u bilaabi lahayd qoraalka buuga qalinjabinta? Mushkilada ugu badan ee ardayda jaamacada sii qalinjabinaya qabsataa waxa weeyaan xageed wax ka bilowdaa iyo sideed waqtigii loo baahanyahay gudbintiisa aad uga gaadhsiisaa.
Hadii aad talaabooyinkan qaadid marka aad doonaysid inaad bilowdid qoraalka buugaaga qalinjabinta (dissertation) waxaad filataa in aad si sahlan oo runtii waqti yar ku dhamayndoontid qoraalka dissertation kaaga kadibna aad ku mabsuudi doontid natiijada aad heshid.
Qoondee Waqtiga aad bilaabaysid: Waa inaad go’aansataa waqtiga aad bilaabaysid qoraalka buuga qalinjabinta. Waxa ugu horeeya ee aad u baahantahay waa in aad qoondeesid waqtiga aad bilaabaysid iyo waqtiga aad dhamaynaysid adigoo mid walba taariikhdiisa qeexaya. Waxaad ku dadaashaa in aad waqtiga buuga qoraalkiisa ku dhameenaysid xiliga lagaa doonayow inu ka horeeyaa ugu yaraan sedex bilood. Waa in u noqdaa waqtigaa aad qabsatay waqti ay kaa goantahay inaad ku dhamaysid wax walba oo aanuu jirin waqti dheeraada oo xaga dambe kaga daraysid.
Go’aanso xiliga aad dhamaynaysid: Cayimaad ku samee xiliga aad dhamaynaysid qoraalkaaga oo ah ugu yaraan sedex bilood marka laga joogo xiliga aad bilowday. Waxaad u xisaabtantaa sidii qof shaqo loo diray oo hadii xiligeeda dhaafo ganaax lacageed laga qaadayo ama mushaharkaaga laga goynayow, waxay taasi kugu dhiiri galinaysaa inaad waqtiga ilaalisid. Sabab kasta oo caqabad kugu ah inaad hawshaada waqtigii loo baahnaa ku godatid intaad meel ku qortid is waydii maxay tahay,mid laga gudbi karo miyaanay ahayn, mise way adagtahay?
Qoondee waqtiga aad ku dhamayn kartid cutub kasta( each chapter): Waa inaad marka hore fikrad ka haysatid inta cutub ee u ka koobnaanayo buugaago, cinwaanada iyo wixii la midka ah, markaa waa in aad qoondeesid chapter kasta inta aad ku dhamayn kartid.( tusaale ahaan 2 weeg hal chapter ). Waqtiga aad chapter kasta u qoondeesay la socodsii macalinkaaga (supervisor) si u ula socdo inta chapter u kaa eegayo ama u dib u habaynta kaaga caawinayo (waa sida kaliya oo u macalinkuna sida ugu dhakhsaha badan wax kaaga sixi karo waxna kula eegi karo).
Qoondee hawsha aad doonaysid inaad qabatid maalin walba: Ku dadaal in maalintii aad qortid 500 oo kalmadood hadii aad ka badsatid waxaa laga yaabaa in hawshaado si hufan ay u socon waydo oo aad culus badan dareentid. Waxa laga yaabaa inaad yaraysatid 500 kalmadood maalintii laakiin ogow kalmadahaas ayuun baa maalin walba kordhaya oo isku biiraya. Daabac hadba inta aad qortid oo miiskaaga dul dhig si aad ula socotid hawshaada midhadalkeeda.
Samayso meel naftaado xasilooni ku dareemayso oo aanad la kulmayn wax arbushaad ah: Meesha aad ku shaqaynaysid waxay kaalin wayn ka qayb qaadataa hawshaado siday u soconayso. Waxaad ku dadaashaa in aad ka fogaatid internet ka gaar ahaan barnaamajyada lagu wada sheekeesto sida Social media Facebook, iyo wixii la mid ka ah waayo waqtigaaga dhaawac ayay ku sameenayaan. Hadii aanay suuragal ahayn iska xidh yaanay waqtigaaga mashquuline.
Furo Internet ka kaliya marka aad doonayso inaad wax la xidhiidha buugaaga qoraalkiisa aad baadhid.
U qaybi waqtigaaga 25 daqiiqo saacadiiba: Cilmi baadhis lagu sameeyay maskaxda ayaa waxay sheegaysaa in qofka bin aadamku u shaqadiisu aad u tayo badantahay marka saacadii loo qaybiyo min 25 daqiiqo loona dhaxaysiiyo 5 daqiiqo oo nasasho ah. Inaga oo cilmi baadhistaa ku salaynayna shaqadeena waxa muhiim ah inu qofku shaqadiisa qadarka daqiiqadahaa u qaybiyo mar walba oo inta aanuu 25 ka daqiiqo ee kale u gudbin oo 5 daqiiqo oo nasasho ah isa siiyo tusaale ahaan koob shaaha cab ama jidhka yara kala bixi laakiin ka fogow internet ka inaad isticmaashid waayo wuu kula fogaanayaa oo waqtiga ayuu cunayaa.
Naftaada daryeelkeeda ku dadaal: Naftaada daryeel, si fiican wax u cun, hurdo wanaagsan seexo oo kugu filan bulshadana ha ka hadhin ee asaxaabtaada iyo ehelkaaga waqti la qaado. Hadii aad wadooyinkaa aan kor ku xusnay aad raacdid waxaad helaysaa waqti badan oo firaaqo ah oo waxyaabo badan oo aad jeceshay ku qabsan kartid cidhiidhi la’aan.